भारतमा कपडा स्पिनिङ रिङ र रिङ यात्री निर्माता | एक्स-अक्ष भारतमा कपडा स्पिनिङ रिङ र रिङ यात्री निर्माता | एक्स-अक्ष
उत्पादनहरू चयन गर्नुहोस्
स्पिनिङ रिङ्स - X Optimax स्पिनिङ रिङ्स - XL - R स्पिनिङ रिङ्स - XL - C स्पिनिङ रिङ्स - एक्स टेन्सा स्पिनिङ रिङ्स - X Gen Rings स्पिनिङ रिंगहरू - विशेष आकार रिंगहरू घुम्ने घण्टी - xl-n घण्टी यात्रीहरू - X Optimax घण्टी यात्रीहरू - xlrs घण्टी यात्री - xl-cs घण्टी यात्रीहरू - xendowrs घण्टी यात्रीहरू - xendowcs घण्टी यात्रीहरू - Xgen RS घण्टी यात्रीहरू - xgencs रिंग यात्रीहरू - Jtraveller
X-Axis को NEXT निर्माण प्रक्रियाले प्रिसिजन इन्जिनियरिङ विज्ञापनलाई लाइन टेक्नोलोजीको शीर्षमा जोड्छ ¸ प्रत्येक गुणस्तर मापदण्डमा उत्कृष्टताको लागि eading
अधिकतमीकरण ≠ लाभ
सबै अधिकतमीकरण प्रयासहरूले परिणामहरू प्रदान गर्दैनन्। X-Axis मा हामी यो बुझ्छौं र स्पिनरलाई वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने अप्टिमाइज्ड स्पिनिङ रिंग र यात्रुहरू प्रदान गर्दछौं।
प्रमुख स्पिनरहरु द्वारा विश्वास
स्पिनिङ रिङ्स र रिङ ट्र्यावलर्सले राम्रो गुणस्तरको धागोको उत्पादनमा योगदान दिन्छ। X-Axis उत्पादन दायरा विश्वभरका अग्रणी स्पिनरहरूद्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिन्छ– जसले गुणस्तरीय धागो स्पिन गर्न सक्षम छन्।
X-Optimax प्रस्तुत गर्दै
ट्रिपल 'O' फाइदाको साथ विशेष स्पिनिङ रिङ र रिङ यात्रीहरू
X-Axis द्वारा निर्मित स्पिनिङ रिंगहरूको विस्तृत दायराले हरेक प्रकारको रिङ स्पिनिङ आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। प्रत्येक उत्पादन यसको परिचालन जीवनभरि महत्त्वपूर्ण भिन्नता बिना श्रेणी-उत्तम स्थिरता र उत्पादन गुणस्तरको साथ राम्रो आउटपुट दिनको लागि बनाइएको छ। यसले स्पिनरहरूलाई राम्रो गुणस्तरको धागो उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ।
ट्रिपल ओ लाभ संग विशेष दायरा
ऊन, एक्रिलिक, वर्स्टेड र सेमी-वर्स्टेडका लागि थ्रेडेड रिंगहरू
सबैभन्दा उन्नत दायरा मध्ये एक
विशेष रूपमा सुपर लेपित सार्वभौमिक स्पिनिङ रिंगहरू
आर्थिक, 20 देखि 40s को लागि आदर्श
X-Axis द्वारा रिंग यार्नले सम्पूर्ण फाइबर र यार्न गणना दायरा कभर गर्दछ। यसको लामो जीवनको लागि परिचित, यी नवीनतम प्रविधि संग निर्मित छन् र सबै भन्दा उन्नत फिनिश र धातु विज्ञान संग आउँछ। स्पिनरहरूको विविध आवश्यकताहरू अनुरूप विभिन्न प्रकारका फिनिशहरूमा उपलब्ध छ।
किन एक को लागी बसोबास, जब तपाईं सबै तीन पाउन सक्नुहुन्छ?
आजका स्पिनरहरूले आउटपुटको माग गर्छन्, जुन मात्रा र गुणस्तरमा बढ्छ। एक आउटपुट जुन अपूर्णतामा कमी र यार्नको मूल्यमा शुद्ध लाभमा देखिने मापन गरिन्छ।
उच्च गतिमा सञ्चालन गर्दा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छ र अपूर्णतालाई एकदमै कम गर्छ। यसले चिकन, बलियो र पनि धागोको साथ पनि Cop निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ, Cop पछि Cop।
आफ्नो जीवनभर कुशलतापूर्वक कार्य गर्दछ र कम से कम अन्त टुटेको साथ निरन्तर, गुणस्तरीय धागो उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ; त्यहाँ स्पिनिङ, बुनाई, बुनाई, रंगाई र फिनिसिङ मेसिनको दक्षता बढाएर।
रिमटेक्स इन्जिनियरिङ प्रा. Ltd (एक ISO 9001:2015 TUV प्रमाणित सह) Regd कार्यालय र प्लान्ट: 2701, GIDC चरण IV, Wadhwan 363 035, गुजरात, भारत
© प्रतिलिपि अधिकार 2021 Rimtex Engineering Pvt. Ltd. सबै अधिकार सुरक्षित